Juki အပ်ချုပ်စက်အစိတ်အပိုင်းများ နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ Juki အပ်ချုပ်စက်အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
Hongcheng Precision Industry Co., Ltd. 1990 ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြွယ်ဝသောလက်ဆောင်တွေကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံရှိသည်နှင့်, ငါတို့ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးမှဆက်စပ်သည် Juki အပ်ချုပ်စက်အစိတ်အပိုင်းများ နောက် ... ပြီးတော့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခွက်တဆယ်နှင့်ဤလယ်ပြင်၌အတွေ့အကြုံကောင်းအပေါ်အားကိုးကျနော်တို့ကအလွန်ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုရရှိဖို့နဲ့မှာအကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူများတစ်ဦးအဖြစ်နှင့် ပတ်သက်. ပါပြီ Taiwan.
Juki မော်ဒယ် bartack အပိုပစ္စည်းများB2424-280-000/B2421-280-0A0 ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအပိုပစ္စည်းများကို Gold Wheel သို့နှစ်ပေါင်းများစွာထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်.ကျနော်တို့သူတို့ကိုအလွန်အမင်းအရည်အသွေးမြင့် HSS ကိုအသုံးပြုသည်.ဓားများ၏ကြာချိန်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.၎င်းသည်အော်ပရေတာတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်.မင်း Don’t ကိုပုံမှန်အသုံးပြုမှုအောက်မှာတော့ဘူးသူတို့ကိုအစားထိုးရန်ရှိသည်.အတိုချုံ့နိုင်သည်.
အကောင်းဆုံး Juki အပ်ချုပ်စက်အစိတ်အပိုင်းများ ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Juki အပ်ချုပ်စက်အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan
Juki မော်ဒယ် DDL-ဓါး ၈၇၀၀၁၁၀-40052/၁၁၀-40201 ကျနော်တို့ရွှေဘီးနှင့်အတူတစ်ခုတည်းအပ်ဓါးထုတ်လုပ်စတင်ခဲ့သည်&တောင်ကြီးမြို့;1990 ကတည်းကတောင်းဆိုမှုကို.DDL-8700 သည်တစ်ခုတည်းအပ်အပ်ချုပ်စက်၏အသုံးအများဆုံးမော်ဒယ်တစ်ခုဖြစ်သည်.ငါတို့သည်လည်းဤမော်ဒယ်တိုတိုချုံ့ကိရိယာကိုဖွံ့ဖြိုး.
Juki Sewing Machine Parts	| Accessoire Machine à Coudre Industrielle Juki	| Juki Industrienähmaschine Ersatzteile	| Запчасти Для Швейных Машин Juki	| Maquina De Costura Juki	| Ricambi Juki	| जूकी सिलाई मशीन के पुर्जे	| Repuestos Para Máquina De Coser	| Juki naaimachine onderdelen	| قطع غيار ماكينة الخياطة Juki	| Bộ phận máy may Juki	| อะไหล่จักรเย็บผ้า Jukiuki	| Suku Cadang Mesin Jahit Juki	| জুকি সেলাই মেশিন যন্ত্রাংশ	| Juki Dikiş Makinası Parçaları